ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် ဗို့စ်ဝဂွန်ကားများ | ဗို့စ်ဝဂွန်ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
White Volkswagen Golf 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Lks 123 ညှိနှိုင်း
Blue Volkswagen Golf 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Volkswagen Golf TSI turbo 2011
Blue Volkswagen Golf TSI turbo 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Volkswagen Golf TSI turbo 2014
Lks 370 ညှိနှိုင်း
Silver Volkswagen Golf TSI turbo 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Red Volkswagen Golf TSI turbo 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Dark blue Volkswagen Golf TSI turbo 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Red Volkswagen Golf 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Lks 295 ညှိနှိုင်း
Blue Volkswagen Golf 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Blue Volkswagen Golf 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Black Volkswagen Golf 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Volkswagen ဆိုတာ ဂျာမနီ အခြေဆိုက် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္မဏီ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစု တစ်ခု အဖြစ် စံချိန်တင်ထား ပါတယ်။ အကြောင်း ကတော့ သူ့လက်အောက် ကနေ ခွဲထွက်တဲ့ ကား ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္မဏီတွေ အများကြီး ရှိနေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဝမ်းနည်း စရာ ကတော့ သူဟာ မြန်မာပြည်ကို အရောက် အပေါက် နည်းနေ ပါသေးတယ်။ အခြား ဂျာမနီ နဲ့ ဥရောပတံဆိပ် များဖြစ်တဲ့ ဘီအမ်ဒဘလူ နဲ့ မာစီးဒီး မြန်မာ ပြည်ကို ဝင်ရောက် လာပြီ ဖြစ်ပေမယ့် သူကတော့ မရောက် သေး ပါဘူး။ သို့ပေမဲ့ များမကြာမီ အနာဂတ် ကာလ အတွင်းမှာ ရောက်ရှိ လာမယ့် ကား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ မြန်မာပြည် ရောက်တဲ့ ဗို့စ် ဝက်ဂွန် ကား က အတော်လေး နည်းနေ ပါသေးတယ်။ တစ်ချို့သော ပြည်တွင်းက ရိူးရွန်အချို့ကတော့ ဂျာမန်ကားတွေချည်းပဲ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ကိုင်တဲ့ ကားကုမ္ပဏီတွေပါ တွေ့လာရပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အရောက် အပေါက် များပြီး လူသိ များတဲ့ ကား အချို့ ကို ရွေးချယ် ဖော်ပြ လိုက်ရ ပါတယ်။
ဗို့စ်ဝဂွန် ကုမ္ပဏီဟာ ဂျာမနီ ကား ဘရန်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဂျာမနီမှာဆိုရင် အရောင်းရဆုံး ဘရန်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာမနီမှာ အကြီးဆုံး မော်တော် ထုတ်လုပ်သူ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာမှတော့ ဒုတိယ အကြီး ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဗောက်ဝဂွန် ရဲ့ အရောင်းရဆုံး ကားစာရင်းမှာ ပါရှိတာက ကားအမျိုးအစား ၃ မျိုး ရှိပါတယ်။ ဟတ်ဘတ် ကား အရွှယ်အစားပုံစံရှိတဲ့ ဗောက်ဝဂွန် ဂေါ့ဖ်၊ ဌင်းကတော့ နောက် မျိုးဆက်တွေကို ဆက်လက် ထုတ်လျက်ရှိပြီး ယနေ့ထိ ထုတ်ပါတယ်။ ဒုတိယ အမျိုးအစားကတော့ ဘီတယ်လို့ ခေါ်တဲ့ လိပ်ခုံးကားလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဆီဒန် လိုင်းထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ဗောက်ဝဂွန် ပတ်စပ်ပါ။ ဌင်းကားကိုတော့ ယနေ့ထိ ထုတ်လုပ်နေပြီး အမေရိကန် ဗားရှင်းဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၃ ဗောက်ဝဂွန်တွင် ၂၅၀၀ စီစီ အင်ဂျင်၊ အော်တိုဂီယာနဲ့ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စွမ်းဆောင်ရည် နဲ့ နည်းပညာပိုင်း
ဗို့စ်ဝဂွန် ဂေါဖ့်ကားတွေရဲ့ အင်ဂျင်ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဗို့စ်ဝဂွန် ဂေါဖ့်ကားတွေဟာ ၂၅၀၀ စီစီကနေ ၂၀၀၀ စီစီ ထိ အင်ဂျင် ရှိတဲ့ကားတွေကိုလည်း ရှိနိုင်ပြီး ၂၀၀၀ စီစီမှာ တာဗို့ပါရှိပြီး ဒီဇယ် လောင်စာဆီကိုလည်း ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင်းကောင်ရေ ၂၀၀ ထွက်တဲ့ GTI ဗားရှင်းတွေမှာလည်း တာဗို့အင်ဂျင်ကို ရနိုင်ပြီး ဌင်းကိုတော့ ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်မှာသာ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၅၀၀ စီစီမှာ အော်တို၊ မန်နျူးယယ် နှစ်မျိုးလုံး ရနိုင်ပြီး အော်တိုကတော့ ၆ ချက်ဖြစ်ကာ မန်နျူးယယ်ကတော့ လေးချက် ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့တွင်းမြို့ပြင် ဆီစားနှုန်းကတော့ ၂၃/၃၃ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခေတ် တစ်ခါက ဝင်တဲ့ Beetle ကား တွေ ခေတ်စား ခဲ့ပြီး ယနေ့ မှာတော့ ခေတ်သစ် Beetle များ ခေတ်စား ပါတယ်။ သူက လည်း ဗြိတိန် Mini Cooper ကား များကို ယှဉ်ပြိုင် နေတဲ့ ကား ဖြစ်ပါတယ်။ Mini Cooper ကား ထက် တော့ အနည်းငယ် ကြီး ပါတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ် ၁၃၀၀ စီစီ၊ ၂၀၀၀ စီစီ၊ ၂၆၀၀ စီစီ အစရှိသဖြင့် အင်ဂျင် အရွယ် အမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ် ပါ သေးတယ်။ မြန်မာပြည် ကို ဝင်တာ ကတော့ ၂၀၀၀ စီစီ ဝန်းကျင် အများစု ဖြစ်ပါတယ်။ အနီရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အပြာ ရောင် အပြင် အခြား အရောင် အသွေး များလည်း ဝင်ပါ သေးတယ်။ ကားက သေးပေမယ့် စွမ်းဆောင်ရည် ကတော့ မသေး ပါဘူး။ အော်တို ဂီယာ အမျိုးအစား၊ ရိုးရိုး လက်ထိုး ဂီယာ အမျိုး အစား ဆိုပြီးတော့ နှစ်မျိုး ထုတ်လုပ် ထား ပါတယ်။ တံခါး ၂ ပေါက် ကား ရှိသလို၊ တံခါး လေးပေါက် ကားလည်း ရှိပါ သေးတယ်။ တစ်ပတ်ရစ် နဲ့ အသစ် ရှိပြီး တစ်ပတ်ရစ် ပို ဝင် ပါတယ်။ အဟောင်း ဆိုရင် ဈေး သိပ် မရှိ ပါဘူး။ ဗြိတိန် Mini Cooper ထက်တောင် ဈေးသက်သာ ပြီး သိန်း ၁၁၀ ဝန်းကျင်ပဲ ရှိတာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗို့စ်ဝဂွန် ရဲ့ထုတ်လုပ်နေတဲ့ အမျိုးအစားများ အနေနဲ့ ဗောက်ဝဂွန်က ကားအမျိုးအစားတော်တော်များများ စုံအောင်ထုတ်ပါတယ်။ လက်ရှိအနေနဲ့ ပစ်ကပ် ထရပ်ကားများ၊ စီးတီးကားလို့ခေါ်တဲ့ မြို့တွင်းမောင်း မီနီကားလေးများ၊ ဆီဒန်ကားစတဲ့ကားတွေကို ထုတ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာတော့ ဗို့စ်ဝဂွန် ဗိုရာ၊ ဗို့စ်ဝဂွန် လိပ်ခုံးကား ဘယ်တယ်၊ ဗို့စ်ဝဂွန် ဂေါဖ့်၊ ဗို့စ်ဝဂွန် ပိုလို စတဲ့ကားတွေကို တွေ့ရပါမယ်။ မျိုးဆက် လေးဆက်မြောက်ဖြစ်တဲ့ ဗို့စ်ဝဂွန် ဘိုရာလေးတွေကို မော်ဒယ် ၂၀၀၀ လောက်မှာ ဈေးသက်သာစွာ ဖြင့် ရနိုင်ပြီး မြန်မာငွေဖြင့် ကုန်ကျမဲ့ ပမာဏကတော့ ကျပ်သိန်း ၁၀၀နီးပါးလောက်ကို ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီဒန်ကားလေးတွေကို ရနိုင်ပြီး ၁၄၀၀ စီစီကနေ ၂၈၀၀ စီစီထိကို ရနိုင်ပါတယ်။ ၁၉၀၀ စီစီမှာ ဒီဇယ် ရနိုင်ပါမယ်။ ဟတ်ဘတ် ပုံစံ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ မျိုးဆက် ခြောက်ဆက်မြောက် ၂၀၀၈ ကနေ ၂၀၁၃ ထိ ထုတ်တဲ့ ဗို့စ်ဝဂွန် ဂေါဖ့်ကားတွေကိုလည်း တွေ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းတို့ကတော့ တံခါး ၅ ပေါက်ဖြစ်ပြီး လူ(၅) ယောက်စီးကားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းက ရရှိနိုင်တဲ့ ဗောက်စ်ဝဂွန်ကား အမျိုးအစားများ
ပြည်တွင်းမှာ တော့ ဗောက်စ်ဝဂွန် ပိုလို နဲ့ စီတီးကားလေးတွေကိုလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ဗောက်စ်ဝဂွန် မာတီး ဗန်တွေကိုလည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဌင်း ဗန်တွေကတော့ လူ (၇) ယောက်စီးတွေ ဖြစ်ပြီး အနောက်ခန်းမှာ တင် လူ (၅ ) ယောက် မျက်နှာချင်းဆိုင် လုပ်ပေးထားပြီး အော်တို ဂီယာတွေနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်တွေ ဖြစ်ပြီး အင်ဂျင် ၂၀၀၀ စီစီမှာ ရှိပါတယ် ။ အစိတ်အပိုင်းများ အနေနဲ့ ပါဝါလောခ့်၊ ပါဝါ စတီယာရင်၊ တီဗီ၊ လေအိတ်၊ ပါဝါ ၀င်းဒိုး စတဲ့ကားတွေ ပါရှိပါတယ်.။ ဈေးနှုန်းကတော့ ကျပ်သိန်း ၁၁၀၀ နီးပါးရှိပြီး ဘရန်နယူး ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဘ၇န်တွေကို ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗို့စ်ဝဂွန် လိပ်ခုံး ဘယ်တဲယ် ကားတွေ နဲ့ ဗို့စ်ဝဂွန် ဂေါ့ဖ်ကားတွေ ကိုလည်းတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Volkswagen ထဲကနေ အိမ်စီးကား အများစု ဝင်ပြီး ယင်းထဲ မှာမှ ဆလွန်း၊ အက်စ်ယူဗီ၊ ဗန်၊ နောက်ဖုံးကား အပြင် အခြားသေ ကား အမျိုးမျိုး လည်း ရှိပါ သေးတယ်။ ဝင်တာ ကတော့ အသစ် လည်း ရှိ သလို တစ်ပတ်ရစ် လည်း ရှိပါ တယ်။ ဂျပန် လေလံ ဈေးကွက် ကနေ ဝင် သလို၊ ဥရောပ တစ်ပတ်ရစ် ဈေးကွက် ကနေ လည်း ဝင်ရောက် ပါတယ်။ အသစ် တွေကိုလည်း အော်ဒါ မှာပေးတဲ့ ကြားခံ အေးဂျင့် များ လည်း ရှိပါ သေးတယ်။
ဗို့စ် ၀ဘ်ဂွန်ဘရန်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းအရာ
ဗို့စ်ဝဂွန်မှာ ဟို ကားတွေ စပေါ်တုန်းက ခေတ်စားခဲ့တဲ့ ဘယ်တယ် လိပ်ခုံးကားလေးတွေကို ယနေ့ထိ ဆက်လက် ထုတ်လုပ်နေတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တန်းကအတိုင်း တံခါး နှစ်ပေါက်နဲ့ လိပ်ခုံးကားလေးတွေကို ယနေ့တိုင် ယခင် ဒီဇိုင်းမပျက်ယွင်းစေဘဲ ဆက်လက် ထုတ်နေပါတယ်။ ၂၀၁၅ထိကို ထုတ်ပါတယ်။ လူ (၄) ယောက်စီးနိုင်မဲ့ အပြင် နောက်အင်ဂျင် ဖြစ်ပြီး ဆီစားသက်သာတဲ့ ကားအမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၅ မော်ဒယ်တွေမှာ ၁၈၀၀ စီစီနဲ့ ၂၀၀၀ စီစီ ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်ကို သုံးပါတယ်။ ဒီဇိုင်းရိုးယှဉ်ပြီး လှပလှတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝါလော့ ပါဝါ စတီယာရင်တို့ပါဝင်ပြီး ဌင်း အင်ဂျင်တွေရဲ့ မြို့တွင်းမြို့ပြင် မိုင်နှုန်းကတော့ ၃၁ မိုင်နေ၄၁ မိုင်ထိ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင်းကောင်ရေ အားက ၁၅၀ ကနေ ၂၁၀ ထိဖြစ်ပါတယ်။ ဟတ်ဘတ်ကားတွေ အပြင် တစ်ခြား အမိုးဖွင့် ကိုယ်ထည်ကား ပုံစံမျိုးကိုလည်း ထုတ်ပါတယ်။ ဈေးကတော့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ဈေးက ဒေါ်လာ ၁၂၀၀ ကနေစထားပြီး ဟတ်ဘတ်တွေဆို ဒေါ်လာ ၂၆၁၅ ကနေစပြီး ပြည်တွင်းကို အရောက် အပေါက် အပြီးအစီး ဆိုရင် ကျပ်သိန်း ၃၀၀ နီးပါးလောက်ကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ၂၀၁၃ မော်ဒယ် ဓာတ်ဆီ အော်တို ဂီယာကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိပ်ဆုံး Volkswagen မော်ဒယ်